Jumma Mubarak - ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Zoma 2018
Jumma Mubarak dia ny teny hoe izay mampiasa silamo rehetra manerana izao tontolo izao mba hiarahaba ny silamo mpanaraka tamin'ny enina andro amin'ny herinandro antsoina hoe “Zoma”.
Zoma (Jumma Mubarak) dia zava-dehibe ny fivavahana Islamika andro ary manana baiko manokana ny Allah (Andriamanitra). Misy antony roa ho an'ity; Mivavaka silamo ny vavaka zoma na Jumma vavaka isan-kerinandro, ary faharoa araka ny Silamo tantara, nisy zava-nitranga manan-danja maro no nitranga tamin'ny andro izao.
Jumma Mubarakah – Sambatra Andro Jumma
jumma Mubarak hevitra
Inona no atao hoe Jumma?
Inona no atao hoe vavaka Jummah?
Jum'ah: Zava-dehibe ny vavaka zoma sy Jumma
Zoma dia andro masina ho an'ny Silamo?
Soa azo avy amin'ny andro Juma
Jumma Mubarak famaritana roa
zava-dehibe ny Jumma Mubarak
Araka ny fampianarana ny Mpaminany Muhammad (PBUH), Jumma dia fitahiana andro. Ho fankalazana ny fitahiana avy amin'ny Juma, Silamo miarahaba amin'izany andro izany.
Firenena ao Middles koa ny fialan-tsasatra isan-kerinandro ny Zoma Alahady fa tsy mba ny silamo dia afaka manatanteraka ny vavaka Jumma tao amin'ny trano fivavahana ary mandany ny fotoanany miaraka amin'ny fianakaviana. Niantso izany ho andro fifaliana dia tsy ho diso.
Jumma dia teny arabo izay midika hoe “Zoma”. Raha Jumma dia teny Arabo teny fa silamo rehetra manerana izao tontolo izao mampiasa teny toy izany koa ho an'ny Zoma, tsy mampaninona izay manaraka ireo fiteny.
Izany no izy satria ny zoma mpandoa izay anarana no “Jumma Vavaka”. Ny dikan'ilay Zoma ara-bakiteny amin'ny teny Anglisy dia ny fiangonana.
Araka ny voalaza etsy ambony, Jumma dia andro manan-danja ao amin'ny finoana silamo noho ny zava-niseho ara-tantara sy ny vavaka manokana. Io vavaka manokana atao hoe vavaka Jummah.
Vavaka ity dia nanatitra fa tsy isaky ny zoma 2 vavaka (Zuhr vavaka) tolakandro tao amin'ny trano fivavahana. The fotoana Jumma vavaka Mety ho samy hafa ao amin'ny tsirairay, izay miankina amin'ny trano fivavahana ny sisa amin'ny fandaharam-potoana ny trano fivavahana, fa matetika no nitranga izany tamin'ny fotoana Zuhur vavaka. mpaminany Mohammed (PBUH) hoy:
"Ny andro tsara indrindra eo imason'i Andriamanitra Zoma, ny andro ny fiangonana "
Ny Quran ihany koa ny mamporisika ny silamo mba hitsidika moske ny vavaka zoma:
"Ry mpino! Rehefa fiantsoana hivavaka dia nanambara ny Zoma mafy haingana ny fahatsiarovana an 'Andriamanitra sy hiala manokana raharaham-barotra. Izay no tsara indrindra ho anao, fa raha nahalala." (Quran 62:9)
Jumma ihany koa ny vavaka manokana ho an'ny Silamo, satria tsy tahaka hafa vavaky ny andro, tsy misy ihany Azaan (Call for vavaka) ary Salah fa koa ny Imaams ny trano fivavahana Khutbah hamonjy manokana (teny) eo anatrehan'ny Jummah vavaka
Ny vavaka ao amin'ny finoana silamo Zoma afaka tsy ho vita raha tsy kabary ity, izay efa natolotra teny amin'ny teny Arabo ihany.
Any amin'ny tany maro ny maro amin'ireo firenena Silamo, ny Imaam ny trano fivavahana ihany koa ny mamonjy ny kabary amin'ny fiteniny mifandray amin'ny finoana silamo.
Inona no atao hoe Jumma
Ny tanjon'ity izany teny izany ny mahafantatra ny silamo mikasika ny fampianarana lehibe ny Mpaminany Muhammad (PBUH) ary mampahatsiahy ny sorona noho ny finoana silamo.
Fomban-drazana io dia tsy tena fahita any amin'ny firenena silamo rehetra fa ny firenena tahaka an'i Pakistan, India, Bangladesy, Ejipta sy Arabia Saodita no manaraka izany.
Zoma no heverina ny andro masina ho an'ny Silamo noho ny maha zava-dehibe sy ny hafatra izay efa natolotra araka ny Mpaminany Muhammad (PBUH) fa androany mba lazao ny maha zava-dehibe.
Ity andro ity dia tsy hoe fotsiny toy ny fitahiana ary koa ny andro Eid (ny andro fankalazana) ny Mpaminany Muhammad (PBUH). Fa izany no antony tsy niantso zoma ho masina.
Maro ireo zava-nitranga manan-danja nitranga tamin'io andro io noho ny silamo izay hiantso ny Jummah andro (Jumu'ah)ho andro masina. Ireo zava-nitranga dia ahitana ny zava-nitranga toy ny:
Allah namorona an'i Adama ny zoma sy naniraka ny ho any amin'ny tany. Araka ny manam-pahaizana silamo, izany ihany koa ny andro nahafatesany
Araka ny fampianarana Silamo, nisy ny adiny iray ny rehetra rehefa vavaky ny olona efa nanaiky ny Allah
Jumma dia voantso ho ny tompon andro amin'ny herinandro amin'ny toy izany koa araka ny Ramadany dia antsoina hoe tompon'ny rehetra volana
Islamika manam-pahaizana milaza fa isaky ny ora ny androany, fanahy an 'arivony no afaka avy ao amin'ny afobe
Araka ny Ibn Majah, androany no voantso ho renin'ny ny andro Tirmidhi izay milaza fa maty ny olona amin'izany andro izany dia ho voavonjy amin'ny famaizana ny fasana
Inona no hevitrao Jumma Mubarak?
Ny asa Mubarak dia na Mabrouk izao tontolo izao no teny Arabo izay midika hoe isaorana na Arahabaina. Ao amin'ny tontolo Silamo, izao teny izao dia nampiasaina mba hiarahaba ny zava-nitranga na ny andro hafa Silamo.
Juma Mubarak tamin'ny teny anglisy
Ramadany Mubarak jumuah
jumma Mubarak izay midika amin'ny teny anglisy
jumma Mubarak amin'ny teny arabo
Noho izany, raha nandre fa ny silamo dia nanao hoe: Jumma Mubarak na Jumma Marouk hafa mpanara-, izany dia midika fa izy dia miarahaba ireo fitahiana io andro manokana amin'izy samy izy. Raha na ny Mubarak sy Mabrouk dia teny arabo fa amin'ny tsy-Arabo firenena silamo,
Silamo kokoa ny mampiasa izany teny izany mba hiarahaba ireo fitahian'ny Zoma amin'izy samy izy fa tsy fampiasana ny teny ny ny eo an-toerana na ny tenim-pirenena tahaka Urdu, Hindi, anglisy, ary tiorka sns.
Ny olona sasany koa kokoa ny mampiasa teny hafa mifandray mba hiarahaba ireo fitahiana avy amin'ny zoma. Ireo teny ireo dia ahitana faly Jummah, faly Jumma, sambatra Jumma Mubarak 2018, Juma Kareem sy Zoma Mubarak sns.
Tsy misy tsy misy dua ny Jumma Mubarak izay efa hita ao amin'ny Quran sy Hadees. Midika izany fa tsy mba hametra ny tenanao ho dua manokana ihany, fa afaka mivavaka ianao na inona na inona izay tokony ho anareo antonona.
Raha Google ny "Jumma Mubarak roa" dia nahita an'arivony samy hafa Jumma Mubarak dua amin'ny fiteny samihafa.
Afaka mandeha amin 'izy ireo izay tianao indrindra fa tsy mametra ny tenanao amin'ny iray voafaritra tsara Jumma Mubarak roa, ny Jumma Mubarak roa dia nampiasain'ny silamo mba hiarahaba amin'ny alalan'ny aterineto sehatra tahaka ny WhatsApp, Facebook, sy Twitter, ary na dia amin'ny alalan'ny SMS sns .
Afaka manao Jumma Mubarak manokana dua na inona na inona fomba ofisialy anisan'izany taorian'ny vavaka Zoma 2018 tao amin'ny trano fivavahana. Moske sasany eto amin'izao tontolo izao indrindra fa handamina ny Jumma roa izay ka mivavaka ho an'ny rehetra ny maha-olombelona sy manokana ho ny Silamo.
Jumma Mubarak 2018: Zava-dehibe, roa, fitahiana, ः ades, ary Quran https://jummamubarak.info
Get vaovao momba Jumma Mubarak ao anatin'izany ny maha zava-dehibe ny Jummah, roa, Hdes, sy ny andininy ao amin'ny Quran
March 14, 2018 Tsy asian-teny